राजेश खोटाङ्गे | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका राजेश खोटाङ्गे – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
Tag Archives: राजेश खोटाङ्गे
पहिरो आए फूलबारीमा मालीहरू जोगिन गाह्रो
हलो ठोक्किए पत्थरमा फालीहरू जोगिन गाह्रो ।।
किसानहरु ठगिन पुगे उचित मूल्य नपाएकाले
चरा मुसाको चौकिदारीमा बालीहरू जोगिन गाह्रो ।।
आकाशमा कालो बादल मडारिँदै झरि पर्यो
बाढी पस्दा सिरान बाट आलीहरू जोगिन गाह्रो ।।
Posted in गजल	| Tagged Khotange, Pallawa, rajesh, पल्लव, राजेश खोटाङ्गे	| Leaveacomment
Posted on January 23, 2018 by gorkhe_sailo
नैतिकता बेच्दै दुनियाँ सामु गिरेर के जिउँनु
लज्जित हुँदै हर्जना इज्जत तिरेर के जिउँनु ।। १
भ्रममा परि अस्तित्व लाई सुकायौ आँगनमा
पचाई लाज झ्यालबाट भित्र छिरेर के जिउँनु ।। २
विश्वले चिन्छ नेपाली वीर भनेर हामीलाई
कमाउँदै मुटु खुकुरी दापमा भिरेर के जिउँनु ।। ३
यहाँ त राजनीति लथालिङ्ग छ
सडक भत्केर भताभुङ्ग छ
नेताको चरित्र उदाङ्गो छ
जनताको शरीर नाङ्गो छ
तिमी नेपाल नफर्क।
पैसा हुने लाई मस्ति छ
केही नहुने लाई सास्ती छ
समझदारीमा काम हुँदैन
बल प्रयोग र जबर्जस्ती छ
भतिज नेपाल नफर्क ।
Posted in कविता, गद्य–कविता, गद्य–कविता	| Tagged Khotange, Pallawa, rajesh, पल्लव, राजेश खोटाङ्गे	| Leaveacomment
Posted on October 2, 2017 by gorkhe_sailo
दशैं लार्इ पछ्याउँदै तिहार आए पछि
गाउँ शहर गुञ्जिदिन्छ देउसी गाए पछि ।।
ठूलोलार्इ मान्नुपर्ने रित हाम्रो पुरानै हो
मनै हर्षित भइ दिन्छ टीका लाए पछि ।।
बालबच्चा रमाएको छुट्टै मज्जा हुन्छ
ओँगन लिपी खसी काटी खान पाए पछि ।।
चिट्ठी लेख्न छाेडेपछि खाम पनि हेला हुन्छ
शितल जुन देखेपछि घाम पनि हेला हुन्छ ।।
पराइकाे छायाँ प्याराे जब लाग्छ बैगुनी लाई
त्यसपछि त आफन्तकाे नाम पनि हेला हुन्छ ।।
मान्छे पशु बन्छ यहाँ लालच भित्र फँस्न पुगे
ठगी लुटमा रमाउँदा काम पनि हेला हुन्छ ।।
Posted on August 14, 2017 by gorkhe_sailo
चौतारी हुँ म बटुवाहरु, आउँछन् र बसेर जान्छन्
फूल ठान्छन् कि कसो, भमराले झैँ डसेर जान्छन् ।।
आफ्नै जस्तो लाग्छ रे, भन्छन् कति प्यारो तिमी
गाला मुसारी नसक्दै, अनि कालो घसेर जान्छन् ।।
बेइमानी नै हतियार बन्छ, सद्भावको खेती सँगै
सरम धरम गुमाएर, हृदय भित्रै पसेर जान्छन् ।।
राजेश खोटाङ्गेका मुक्तकहरूः
खागबाट कोइला बन्दैछ यहाँ, जलेर जिन्दगी
उठ्न लाई कोशिस गर्दैछ यहाँ, ढलेर जिन्दगी
रेफ्रीले कुटिल इशारा दिँदा, हारियो रणमा
बढाउन कदम मुस्किल छ यहाँ, गलेर जिन्दगी ।।
अलिकति विगत लाई, फर्केर हेर
आफ्नो पनि पालो आउँछ, पर्खेर हेर
दुश्मनले रोपी देलान्, क्याक्टस बाटोमै
पलपल सचेत भई, तर्केर हेर ।।
Posted in टुक्रे कविता, मुक्तक	| Tagged Khotange, Pallawa, rajesh, पल्लव, राजेश खोटाङ्गे	| Leaveacomment
Posted on June 22, 2017 by gorkhe_sailo
झलमल्ल जुन लागेका, रातहरूले धोका दिए
बिस्वास सँग साटिएका, घातहरूले धोका दिए ।।
दोष आफ्नो कर्मको, मात्रै कहाँ हुँदो रहेछ
लोभीपापी आफन्तका, साथहरूले धोका दिए ।।
अप्ठ्यारोमा पर्दा खेरि, हामी छौं नि भन्दै
पछाडि बाट टेवा दिने, हातहरूले धोका दिए ।।
निर्वाचनको भोली पल्ट, पर्ख कहाँ जान्छौ र ?
त्यसपछि त महँगो खाना, कहिले खान्छौ र ??
भोट चाहियो अनि हाम्रा पाऊ समाउदैछौ
असार १ मा हाम्लाई मान्छे किन ठान्छौ र ??
गतिविधि हेर्दा लाग्यो, बाँदर भन्दा फरक छैनौ
खै ! कहिले आफुलाई, नैतिकताले बान्छौ र ??
राजेशका केही मुक्तकहरू !
सानो छँदा दुख गरि, हामीलाई पाल्नु भयो
सन्ततिको भलाई खातिर, रहरहरू गाल्नु भयो
जब रेखदेख गर्ने भयौँ, दुनियाँमै रहनु भएन
जिवित हुँदा हाम्रै लागि पलपल आँसु खसाल्नु भयो ।।
पहाडमा घर बन्छन्, ढुंगा माटो मिसाएर
प्रगति हुन्न केही, रुखलाई, दुख बिसाएर
मान्छे यतै फर्किनेछ, गन्तव्यमा पुगेपछि
उपलब्धि छ‌ैन है भाई, नयनहरु चिसाएर ।।
Posted on May 3, 2017 by gorkhe_sailo
साँक्षी बन्न के सक्थ्याै, आफैँलाई ढाँट्ने तिमी
मलाई रुखमा चढाएर, तल फेद काट्ने तिमी ।।
दुई हात जोडी अञ्जुलीमा, मायाँ थोरै मागेथेँ
के आश गर्नु पैसा सँग, नैतिकता साट्ने तिमी ।।
तिम्रो मुखमा बोली रैछ, तर वचन विहिन
स्वार्थ पूरा हुने देख्दा, जुठो पनि चाट्ने तिमी ।।
राजेश खोटाङ्गेका केही मुक्तकहरूः
Posted on April 9, 2017 by gorkhe_sailo
नयाँ सालमा नयाँ फूलको, माला गाँस्ने हो कि
पुराना पीडा बिर्सिएर, अब सधैं हाँस्ने हो कि
पारिवारिक मेलमिलाप र देशको भलो चाँहदै
सबै मिली निधारमा, रातो टीका टाँस्ने हो कि !!
पसलमा राखेर किराना बेचियो
परदेशमा पुगेर पसिना बेचियो
तर कहिल्यै बिक्री गरिन अाफुलाई
बरु निकै सस्तोमा सपना बेचियो ।।
कवितामा सप्तरी !
Posted on March 18, 2017 by gorkhe_sailo
सप्तरीमा मान्छे मार्दा, मेची काली दुखेको छ।
अब के के हुन्छ भन्दै, ओठ तालु सुकेको छ।।
जनता सबै मिलेर, एक जुट बन्नै पर्ने भयो ।
धोका दिने नेता गाड्न, खाडल खन्नै पर्ने भयो ।।
राजनीति केही हैन, भन्ने कुरा बुझे पछि ।
एक अर्काको भावना लाई, सम्मान गर्दै पुजे पछि ।।
अँगालोमा बाँधिएर, मानवता लाई साटिने छन् ।
त्यसपछि त चोर नेताका हात खुट्टा काटिने छन् ।।
Posted in कविता, गीतिकविता, पद्य–कविता	| Tagged Khotange, Pallawa, rajesh, पल्लव, राजेश खोटाङ्गे	| 1 Comment
Posted on March 16, 2017 by gorkhe_sailo
यसो हेर्दा तिम्रो सिउँदो, खाली जस्तो लाग्यो
मेरै साथी फलानोको, साली जस्तो लाग्यो ।।
के छ खबर सिँगल भए, दर्खास्त पो दिउँ कि
विना फूलको बगैंचाकि, माली जस्तो लाग्यो ।
झट्ट देख्दा लोभै लाग्ने, साँच्चै कति राम्री
मँसिर मास भित्र्याउँने, बाली जस्तो लाग्यो ।।
राजेश खोटाङ्गेका केही मुक्तक
माटो चाखेर जमिन, कहाँ किन्न सकिन्छ र
बसेर भुइँमा राँगो, कहाँ छिन्न सकिन्छ र ?
सुन्दर मुहार भित्रका थुप्रै, राक्षस आत्माहरु
छाला देखेर मान्छे कहाँ, चिन्न सकिन्छ र ।।
झ्याल बाट हेरि देउन, पानी भर्न आएकी छु
लुकिछिपी तिम्लाई भेट्ने, बहानामा धाएकी छु ।
नशा पिए जस्तो भयो, तिम्रो यादले मलाई
झझल्कोले सताउँदा, आधा पेट खाएकी छु ।।
Posted on March 2, 2017 by gorkhe_sailo
एक अर्कालाई झुकाउँने, दम हुन्छ प्रीति भित्र
टुटेका लाई जुटाउने, गम हुन्छ प्रीति भित्र ।।
सभ्य अनि शिक्षित, परिवारका जोडी भए
नैतिकतालाई बचाउँने, सरम हुन्छ प्रीति भित्र ।।
सन्तानलाई सँस्कार युक्त, बनाउँन नसकिए
पैसा भए पुग्छ भन्ने, अहम् हुन्छ प्रीति भित्र ।।
Posted on February 17, 2017 by gorkhe_sailo
अनुहार त ठिकै हो व्यवहार, घोच्ने काँडा जस्तो
स्वर उस्तै मिठो रैछ, भुइँमा झर्या भाँडा जस्तो ।।
कस्तो मिल्या जिउडाल अनि, हेराई झनै मादक
हिँडाई पनि क्याट वाक रैछ, लैनो पाडा जस्तो ।।
कपाल देखेँ बहुत शिल्की, साइबाबा लाई बिर्साउने
निधार झनै फराकिलो, घर माथिकै डाँडा जस्तो ।।
राजेश खोटाङ्गेका मुक्तक हरूः
धनी र गरीबमा यहि, असमान फरक छ
पशुलाई स्वर्ग र, मान्छेलाई यहिँ नरक छ ।
सोच बिचार अनि, सहानुभूति नभए पछि
दुखीको नियति हेरौँ यस्तै यथार्थपरक छ ।।
हामी सधैँ पसिना, बगाउँछौं खाडीमा
अनि नेताहरू लाई, चढाउँछौं गाडीमा ।
कठै!एउटा खबुस र तातो पानी पिएर
काम गर्ने शक्ति, बढाउँछौं नाडीमा ।।
१४ अक्षरीय गजल
Posted on January 5, 2017 by gorkhe_sailo
तिमीलाई नै चिट्ठी लेख्ने, हातै बैगुनी
मलाई लुट्ने तिम्रो मिठो, बातै बैगुनी ।।
अप्ठ्यारोमा शर्ण पर्ने, मेरै राजा भन्दै
सहज हुँदा कुल्चि हिँड्ने, घातै बैगुनी ।।
कुल घर समाजको, दायित्व नै भुलि
लाज शर्म नै बिर्सि दिने, मातै बैगुनी ।।
Posted on January 3, 2017 by gorkhe_sailo
अञ्जुलीमा अागो बाली, पिठ्युँ सेक्न नमिल्ला कि
मात्तिएर जमिन छोड्दै, धुरी टेक्न नमिल्ला कि !!
दुई चार कक्षा के पढियो, लाग्छ अाफु बुद्धिमानी
मूर्ख बन्दै हत्केलाले, सूर्य छेक्न नमिल्ला कि !!
भावना र तन मन मिल्दा, साह्रै प्रिय लाग्ने मान्छे
अाफ्नो अनुकुल नहुँदैमा, पराई देख्न नमिल्ला कि !!